फागुन १, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव १९ महिनापछि मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् । २४ औं जनयुद्ध दिवसको अबसरमा विप्लवले रातो खबरको युट्यूव च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएका छन् । १९ महिनासम्म कुनै मिडियामा प्रत्येक्ष रुपमा अन्तरवार्तामा नदेखिएका […]
फागुन ४, काठमाडौं । मंसिर ७ गते भारतबाट भन्सार पास लिएर डिएल १० सिएफ ६९२१ नम्बरको इको स्पोर्टस गाडी नेपाल भित्रियो । भन्सार र प्रहरी कर्मचारी दुवैले ुसो गाडीभित्र के छ भनी सामान्य सोधीखोजी गरे पनि खनातलासी गरेनन् । त्यसको केही […]
फागुन ४, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता अलमलमा परेको छ । शीर्ष नेताको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि एकता नै टुंगो लाग्न नसकेको हो । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा नमिलेपछि […]
फागुन ४, काठमाडौं । कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) पार्टीमा नेता उत्पादनको नर्सरी मानिन्छ । कांग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूसम्मको अनुहारले पनि नेविसंघ नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी भएको प्रस्ट्याउँछ । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि कांग्रेसका […]
फागुन ४, काठमाडौं । घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन कलेज सञ्चालकसँग ७८ लाख रुपियाँ घूस लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका […]
सरकारकै कारण रोकियो पुल
माघ २०, कालिकोट । सुर्खेत-जुम्ला सडक खण्डका पुल निमार्ण नहुदा यातायातका साधनले निकै सास्ती खेप्नु परेको यो नौलो घटना होइन । कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकामा पर्ने ठेका नम्वर तीन खल्लागाड छेप्का पुल सरकारकै कारणले रोकिएको निमार्ण ब्यबसायी प्रेमवहादुर शाहीले बताए […]
केबी गुरुङ । मैले नसोधी गायको छु र मिस्टेक पनि गरे, सो सरि ल दाइ ? हजुरबाट पनि धेरै सिक्नु छ दाइ, सो लोक गित गाउने पनि मैले कोसिस गर्दैछु । हिड्ने मान्छे लड्छ ! तपाइँले सिकाउनु एको छ, त्यसको लागि धन्याबाद । […]
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी दाहाल घर फिर्ता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की धर्मपत्नी सीता दाहाल स्वास्थ्यलाभ गरी सोमबार निवास फकिएकी छन् । यही माघ ६ गतेदेखि ललितपुरको सुमेरु अस्पतालमा उनको भाइरल ज्वरोको उपचार भइरहेको थियो । उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सोमबार […]